သမိုင်းတလျှောက် အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုဟ် (၁၀)ဦး – Gentleman Magazine
သမိုင်းတလျှောက် အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုဟ် (၁၀)ဦး
သမိုငျးတလြှောကျ အခမျြးသာဆုံးပုဂ်ဂိုဟျ (၁၀)ဦး
ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးလို့ ပြောလိုက်ရင် Bill Gates နဲ့ Warren Buffets တို့ကိုပဲ ပြေးမြင်မိမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ သူတို့ထက် ချမ်းသာတဲ့သူ မရှိဘူးဆိုပေမယ့် အတိတ်သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကို ပြန်ကြည့်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့က အချမ်းသာဆုံးစာရင်း ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခေတ်သစ် ခေတ်ဟောင်း သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေက မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်ကို ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူတွေက မြောက်များစွာသော စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက သွေးချောင်းစီးတိုက်ပွဲတွေကတဆင့်၊ တစ်ချို့တွေကတော့ သရဖူဆောင်းပြီးတော့ တစ်မျိုး၊ ချွေတာစုဆောင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြီးမားလှတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ တည်ထောင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဥစ္စာဓနတွေကို ရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုခေတ်ကာလမှာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်အများစုက တောင်လိုပုံနေတဲ့ ငွေကြေးဥစ္စာတွေကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတဆင့်ရှာဖွေတည်ဆောက်ခဲ့ကြပေမယ့် သမိုင်းကြောင်းထဲမှာတော့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပိုများခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ အခုအချိန်အထိ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ? Alexendar the Great၊ Genghis Khan ၊ King Solomon တို့လို သမိုင်းဝင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်တွေဖြစ်ပေမယ့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို စာရင်းကောက်ဖို့ မလွယ်တော့သူတွေကို ဖယ်ပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင် သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုဟ် (၁၀)ယောက်ရှိပါတယ်။
၁၀။ Cornelius Vanderbilt (ကန်ဒေါ်လာ ၁၈၅ ဘီလီယံ)
Cronelius Vanderbilt ကတော့ အမေရိကန်သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ အထင်ရှားဆုံးအမည်နာမတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်များမှာ နိုင်ငံတ၀ှမ်း မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သင်္ဘောလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာသူဖြစ်ပါတယ်။
၉။ Henry Ford (ကန်ဒေါ်လာ ၁၉၉ ဘီလီယံ)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသမိုင်းကြောင်းမှာ အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်တွေထဲက တစ်ဦးကတော့ Henry Ford ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Henry Ford ကတော့ Ford Motor ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး မော်တော်ကားတွေကို အမြောက်အများထုတ်လုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမှာ စက်မှုစီးပွားရေးလောကရဲ့ ဥသျှောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၈။ Muammar Gaddafi (ကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဘီလီယံ)
Muammar Gaddafi ကိုတော့ စာဖတ်သူအများစုအများစု ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မကြာသေးခင်နှစ်ပိုင်းအတွင်းက မြောက်အာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လစ်ဗျားနိုင်ငံရဲ့ အာဏာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ဖြုတ်ချခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ Gaddafi ဟာ လစ်ဗျားနိုင်ငံကို သူအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ (၄၂)နှစ်အတွင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၀)ဘီလီယံလောက်ကို ထိန်းသိမ်းပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုအာဏာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Gaddafi ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း လစ်ဗျားပြည်တွင်းစစ်မှာ တော်လှန်ရေးသမားတွေရဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
၇။ William the Conqueror (ကန်ဒေါ်လာ ၂၂၉ ဘီလီယံ)
William the Conqueror ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၉)ဘီလီယံကနေ (၂၉၉)ဘီလီယံလောက် အထိရှိနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ William ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပြီး ၁၀၆၆ ခုနှစ်ကနေ ၁၀၈၇ ခုနှစ်အထိ စိုးစံအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၆။ Jakob Fugger (ကန်ဒေါ်လာ ၂၂၁ ဘီလီယံ)
သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုဟ်တွေထဲမှာ Jakob Fugger ကလည်း တစ်ဦးအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကနေ ဒေါ်လာ (၂၂၁)ဘီလီယံကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ Fugger ဟာ ၁၄၅၉ ခုနှစ်မှာ ဂျာမနီနိုင်ငံ အော့စ်ဘက်ဂ်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၅၂၅ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ Fugger ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ အီတလီနိုင်ငံအတွင်း အထည်အလိပ်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ဟန်ဂေရီနဲ့ ဘိုဟီးမီးယားနိုင်ငံတို့က ရွှေတွင်း ငွေတွင်းတွေကြောင့် ရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Mir Osman Ali Khan (ကန်ဒေါ်လာ ၂၃၀ ဘီလီယံ)
Mir Osman Ali Khan အကြောင်းကိုတော့ ကြားဖူးကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူကလည်း ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်းမှာ ပါသင့်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟိုက်ဒရာဘတ်ပြည်နယ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုက ဒေါ်လာ(၂၃၀)ဘီလီယံအထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၁၁ ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်ပြီး ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ကာ (၃၇)နှစ်အုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်။ သူလက်ထက်မှာ ပညာရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးနဲ့၊ မီးရထားလမ်းကွန်ယက်ကျယ်ပြန့်ရေးတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
၄။ Nikolai Alexandrovich Romannov (ကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဘီလီယံ)
Tsar Nicholas II လို့ လူသိများတဲ့ Nikolai Alexandrovich Romannov ဟာ ရုရှားတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း နိုင်ငံမပြိုကွဲခင်က နောက်ဆုံးအင်ပါရာအရှင်သခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျော်ကြားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ကန်ဒေါ်လာ (၃၀၀)ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားတော်လှန်ရေးအပြီး ၁၉၁၈ ခုနှစ်မှာ သူနဲ့သူ့မိသားစုတစ်ခုလုံးကို ကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်သားစရာတစ်ခုက Nicholas II ဟာ Russan Orthodox ဘုရားကျောင်းက အသိအမှတ်ပြု သူတော်စင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လူသားသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ အချမ်းသာဆုံး သူတော်စင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Andrew Carnegie (ကန်ဒေါ်လာ ၃၁၀ ဘီလီယံ)
Andrew Carnegie ဟာ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှာ သံမဏိလုပ်ငန်းကနေတဆင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး အာဏာကြီးမားတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ စကော့တလန်နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ Carnegie ဟာ ဆင်းရဲသားမိသားစုဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၈၄၀ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကျမှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း ၀င်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းများစွာမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ပြီးနောက်မှာ U.S. Steel Corp ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ(၃၁၀)ဘီလီယံအထိ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထင်ရှားရတဲ့အကြောင်းရင်းက Carnegie ဟာ ကမ္ဘာ့ရှေ့ဆောင် ပရဟိတသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ John D. Rockefeller (ကန်ဒေါ်လာ ၃၄၀ ဘီလီယံ)
Rockefeller ဟာလည် အမေရိကန်သမိုင်းကြောင်းမှာ နာမည်တွင်ကျန်ရစ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝမှု ဒေါ်လာ (၃၄၀)ဘီလီယံက ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယအများဆုံးကြွယ်ဝမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၃၉ ခုနှစ်အတွင်း နယူးယောက်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ရေနံနဲ့ စွမ်းအင်း ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမှာ Standard Oil ရေနံလုပ်ငန်းကနေ အကျိုးအမြတ်တွေ များစွာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Rockefeller ဟာလည် သူ့ရဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကြောင့် နာမည်ကျော်ကြားသလို University of Chicago နဲ့ Rockefeller University တို့ကို တည်တောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Mansa Musa (ကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀ ဘီလီယံ)
မှတ်တမ်းတင်နိုင်သလောက် ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုဟ်ကတော့ Mansa Musa ဒါမှမဟုတ် Musa I of Mali ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မာလီအင်ပါရာရဲ့ အင်ပါရာအရှင်သခင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့ အညီ သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်း ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားလောက်အောင် ကန်ဒေါ်လာ (၄၀၀)ဘီလီယံအထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုဟ်ထက် (၄)ဆလောက်ပိုများနေပါတယ်။ Musa ကို ၁၂၈၀ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၃၃၇ ခုနှစ်အထိ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အာဖရိကတ၀ှမ်းမှာ ပညာရေးအဆောက်အဦးတွေနဲ့ ဗလီတွေ အများအပြားတည်ဆောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ယနခေ့တျေ ကမ်ဘာမှာအခမျြးသာဆုံးလို့ ပွောလိုကျရငျ Bill Gates နဲ့ Warren Buffets တို့ကိုပဲ ပွေးမွငျမိမှာပါ။ ဟုတျပါတယျ။ အခုလကျရှိအခြိနျမှာ သူတို့ထကျ ခမျြးသာတဲ့သူ မရှိဘူးဆိုပမေယျ့ အတိတျသမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျကို ပွနျကွညျ့ပွီး နှိုငျးယှဉျကွညျ့မယျဆိုရငျ သူတို့က အခမျြးသာဆုံးစာရငျး ထိပျဆုံးမှာ ရပျတညျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ခတျေသဈ ခတျေဟောငျး သမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျမှာ ခမျြးသာကွှယျဝသူတှကေ မရမေတှကျနိုငျလောကျအောငျကို ရှိခဲ့ပါတယျ။ လူတှကေ မွောကျမြားစှာသော စညျးစိမျဥစ်စာတှကေို နညျးလမျးအမြိုးမြိုးနဲ့ တညျဆောကျခဲ့ကွပါတယျ။ တဈခြို့တှကေ သှေးခြောငျးစီးတိုကျပှဲတှကေတဆငျ့၊ တဈခြို့တှကေတော့ သရဖူဆောငျးပွီးတော့ တဈမြိုး၊ ခြှတောစုဆောငျပွီးတော့ပဲဖွဈဖွဈ၊ ကွီးမားလှတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးကွီးတှေ တညျထောငျပွီးတော့ပဲဖွဈဖွဈ ဥစ်စာဓနတှကေို ရယူပိုငျဆိုငျခဲ့ကွပါတယျ။ အခုခတျေကာလမှာ ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံးဆိုတဲ့ ပုဂ်ဂိုဟျအမြားစုက တောငျလိုပုံနတေဲ့ ငှကွေေးဥစ်စာတှကေို စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေတဆငျ့ရှာဖှတေညျဆောကျခဲ့ကွပမေယျ့ သမိုငျးကွောငျးထဲမှာတော့ အကွမျးဖကျမှုတှေ ပိုမြားခဲ့ပါတယျ။
ဒီတော့ အခုအခြိနျအထိ အခမျြးသာဆုံးဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ ပုဂ်ဂိုဟျက ဘယျသူဖွဈမလဲ? Alexendar the Great၊ Genghis Khan ၊ King Solomon တို့လို သမိုငျးဝငျခမျြးသာကွှယျဝတဲ့ ပုဂ်ဂိုဟျတှဖွေဈပမေယျ့ ပိုငျဆိုငျမှုကို စာရငျးကောကျဖို့ မလှယျတော့သူတှကေို ဖယျပွီး ကွညျ့မယျဆိုရငျ သမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျမှာ အခမျြးသာဆုံးပုဂ်ဂိုဟျ (၁၀)ယောကျရှိပါတယျ။
၁၀။ Cornelius Vanderbilt (ကနျဒျေါလာ ၁၈၅ ဘီလီယံ)
Cronelius Vanderbilt ကတော့ အမရေိကနျသမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျမှာ အထငျရှားဆုံးအမညျနာမတဈခု ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ၁၈၀၀ ပွညျ့နှဈမြားမှာ နိုငျငံတဝှမျး မီးရထားလမျးဖောကျလုပျရေးလုပျငနျး၊ သင်ျဘောလုပျငနျးတှနေဲ့ ကွှယျဝခမျြးသာလာသူဖွဈပါတယျ။
၉။ Henry Ford (ကနျဒျေါလာ ၁၉၉ ဘီလီယံ)
အမရေိကနျပွညျထောငျစု စီးပှားရေးလုပျငနျးသမိုငျးကွောငျးမှာ အရေးပါအရာရောကျတဲ့ ပုဂ်ဂိုဟျတှထေဲက တဈဦးကတော့ Henry Ford ပဲဖွဈပါတယျ။ Henry Ford ကတော့ Ford Motor ကုမ်ပဏီကို တညျထောငျခဲ့သူဖွဈပွီး မျောတျောကားတှကေို အမွောကျအမြားထုတျလုပျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ သယျယူပို့ဆောငျရေး ခတျေပွောငျးတျောလှနျရေးမှာ စကျမှုစီးပှားရေးလောကရဲ့ ဥသြှောငျတဈဦးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
၈။ Muammar Gaddafi (ကနျဒျေါလာ ၂၀၀ ဘီလီယံ)
Muammar Gaddafi ကိုတော့ စာဖတျသူအမြားစုအမြားစု ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမှာပါ။ မကွာသေးခငျနှဈပိုငျးအတှငျးက မွောကျအာဖရိကနိုငျငံတဈခုဖွဈတဲ့ လဈဗြားနိုငျငံရဲ့ အာဏာရှငျတဈဦးဖွဈခဲ့ပွီး ဖွုတျခခြံခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။ Gaddafi ဟာ လဈဗြားနိုငျငံကို သူအုပျခြုပျခဲ့တဲ့ (၄၂)နှဈအတှငျးမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ (၂၀၀)ဘီလီယံလောကျကို ထိနျးသိမျးပိုငျဆိုငျထားခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီလိုအာဏာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Gaddafi ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှဈအတှငျး လဈဗြားပွညျတှငျးစဈမှာ တျောလှနျရေးသမားတှရေဲ့ သတျဖွတျခွငျးကို ခံခဲ့ရပါတယျ။
၇။ William the Conqueror (ကနျဒျေါလာ ၂၂၉ ဘီလီယံ)
William the Conqueror ရဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုကို အမရေိကနျဒျေါလာ (၂၀၉)ဘီလီယံကနေ (၂၉၉)ဘီလီယံလောကျ အထိရှိနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ William ဟာ အင်ျဂလနျနိုငျငံရဲ့ ဘုရငျတဈပါးဖွဈပွီး ၁၀၆၆ ခုနှဈကနေ ၁၀၈၇ ခုနှဈအထိ စိုးစံအုပျခြုပျခဲ့ပါတယျ။
၆။ Jakob Fugger (ကနျဒျေါလာ ၂၂၁ ဘီလီယံ)
သမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျ ကမ်ဘာအခမျြးသာဆုံးပုဂ်ဂိုဟျတှထေဲမှာ Jakob Fugger ကလညျး တဈဦးအပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ကုနျသှယျရေးနဲ့ ဘဏျလုပျငနျးတှကေနေ ဒျေါလာ (၂၂၁)ဘီလီယံကို ပိုငျဆိုငျနိုငျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ Fugger ဟာ ၁၄၅၉ ခုနှဈမှာ ဂြာမနီနိုငျငံ အော့ဈဘကျဂျမွို့မှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး ၁၅၂၅ ခုနှဈမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။ Fugger ရဲ့ ခမျြးသာကွှယျဝမှုဟာ အီတလီနိုငျငံအတှငျး အထညျအလိပျကုနျသှယျမှုနဲ့ ဟနျဂရေီနဲ့ ဘိုဟီးမီးယားနိုငျငံတို့က ရှတှေငျး ငှတှေငျးတှကွေောငျ့ ရရှိလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၅။ Mir Osman Ali Khan (ကနျဒျေါလာ ၂၃၀ ဘီလီယံ)
Mir Osman Ali Khan အကွောငျးကိုတော့ ကွားဖူးကွမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူကလညျး ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံးစာရငျးမှာ ပါသငျ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံ ဟိုကျဒရာဘတျပွညျနယျရဲ့ အုပျခြုပျသူတဈယောကျအနနေဲ့ သူ့ရဲ့ပိုငျဆိုငျမှုက ဒျေါလာ(၂၃၀)ဘီလီယံအထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၁၁ ခုနှဈမှာ သူ့ရဲ့ဖခငျဖွဈသူကှယျလှနျပွီး ပွညျနယျအုပျခြုပျသူတဈယောကျဖွဈလာခဲ့ကာ (၃၇)နှဈအုပျစိုးခဲ့ပါတယျ။ သူလကျထကျမှာ ပညာရေး၊ လြှပျစဈဓာတျအားရရှိရေးနဲ့၊ မီးရထားလမျးကှနျယကျကယျြပွနျ့ရေးတို့ကို လုပျဆောငျခဲ့ပွီး ၁၉၆၇ ခုနှဈမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
၄။ Nikolai Alexandrovich Romannov (ကနျဒျေါလာ ၃၀၀ ဘီလီယံ)
Tsar Nicholas II လို့ လူသိမြားတဲ့ Nikolai Alexandrovich Romannov ဟာ ရုရှားတျောလှနျရေးကာလအတှငျး နိုငျငံမပွိုကှဲခငျက နောကျဆုံးအငျပါရာအရှငျသခငျဖွဈခဲ့တဲ့အတှကျ ကြျောကွားသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့ပိုငျဆိုငျမှုဟာ ကနျဒျေါလာ (၃၀၀)ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပါတယျ။ ရုရှားတျောလှနျရေးအပွီး ၁၉၁၈ ခုနှဈမှာ သူနဲ့သူ့မိသားစုတဈခုလုံးကို ကှပျမကျြခဲ့ပါတယျ။ သူနဲ့ပတျသကျပွီး မှတျသားစရာတဈခုက Nicholas II ဟာ Russan Orthodox ဘုရားကြောငျးက အသိအမှတျပွု သူတျောစငျတဈဦးဖွဈပွီး လူသားသမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျမှာ အခမျြးသာဆုံး သူတျောစငျလညျးဖွဈပါတယျ။
၃။ Andrew Carnegie (ကနျဒျေါလာ ၃၁၀ ဘီလီယံ)
Andrew Carnegie ဟာ ၁၈၀၀ ပွညျ့နှဈလယျပိုငျးလောကျမှာ သံမဏိလုပျငနျးကနတေဆငျ့ ခမျြးသာကွှယျဝပွီး အာဏာကွီးမားတဲ့ စကျမှုလုပျငနျးရှငျတဈဦးဖွဈပါတယျ။ စကော့တလနျနိုငျငံမှာ မှေးဖှားခဲ့တဲ့ Carnegie ဟာ ဆငျးရဲသားမိသားစုဝငျတဈဦးဖွဈခဲ့ပွီး ၁၈၄၀ ခုနှဈနှောငျးပိုငျးကမြှ အမရေိကနျပွညျထောငျစုအတှငျး ဝငျရောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လုပျငနျးမြားစှာမှာ ရငျးနှီးမွုပျနှံခဲ့ပွီးနောကျမှာ U.S. Steel Corp ကို တညျထောငျခဲ့ပွီး ဒျေါလာ(၃၁၀)ဘီလီယံအထိ ကွှယျဝခမျြးသာလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူနဲ့ပတျသကျပွီး ထငျရှားရတဲ့အကွောငျးရငျးက Carnegie ဟာ ကမ်ဘာ့ရှဆေ့ောငျ ပရဟိတသမားတဈယောကျဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
၂။ John D. Rockefeller (ကနျဒျေါလာ ၃၄၀ ဘီလီယံ)
Rockefeller ဟာလညျ အမရေိကနျသမိုငျးကွောငျးမှာ နာမညျတှငျကနျြရဈသူတဈဦးဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ပိုငျဆိုငျကွှယျဝမှု ဒျေါလာ (၃၄၀)ဘီလီယံက ကမ်ဘာမှာ ဒုတိယအမြားဆုံးကွှယျဝမှုပဲ ဖွဈပါတယျ။ ၁၈၃၉ ခုနှဈအတှငျး နယူးယောကျမွို့မှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး ရနေံနဲ့ စှမျးအငျး ခတျေပွောငျးတျောလှနျရေးမှာ Standard Oil ရနေံလုပျငနျးကနေ အကြိုးအမွတျတှေ မြားစှာရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ Rockefeller ဟာလညျ သူ့ရဲ့ ပရဟိတလုပျငနျးတှကွေောငျ့ နာမညျကြျောကွားသလို University of Chicago နဲ့ Rockefeller University တို့ကို တညျတောငျခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။
၁။ Mansa Musa (ကနျဒျေါလာ ၄၀၀ ဘီလီယံ)
မှတျတမျးတငျနိုငျသလောကျ ကမ်ဘာမှာ အခမျြးသာဆုံးပုဂ်ဂိုဟျကတော့ Mansa Musa ဒါမှမဟုတျ Musa I of Mali ပဲဖွဈပါတယျ။ မာလီအငျပါရာရဲ့ အငျပါရာအရှငျသခငျတဈယောကျဖွဈတာနဲ့ အညီ သူ့ရဲ့ပိုငျဆိုငျမှုကလညျး ပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈသှားလောကျအောငျ ကနျဒျေါလာ (၄၀၀)ဘီလီယံအထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီပမာဏဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ ကမ်ဘာအခမျြးသာဆုံးပုဂ်ဂိုဟျထကျ (၄)ဆလောကျပိုမြားနပေါတယျ။ Musa ကို ၁၂၈၀ ခုနှဈမှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး ၁၃၃၇ ခုနှဈအထိ နထေိုငျခဲ့ပါတယျ။ အာဖရိကတဝှမျးမှာ ပညာရေးအဆောကျအဦးတှနေဲ့ ဗလီတှေ အမြားအပွားတညျဆောကျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
Previous: သူမ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲ ?
Next: အကြောပြတ်ခြင်းများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင့်သည့်နည်းလမ်းများ